Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Harry Kane Oo Lagu Heli Karo Hal Wado, Chelsea Oo U Dhaqaaqday Erling Braut Haaland Iyo Qodob Kale
[ June 19, 2021 ] Wax ka ogoow shan halyeey oo Real Madrid aysan ixtiraamin kadib Ramos.	Wararka Ciyaaraha Maanta
[ June 19, 2021 ] Wararka Suuqa kala iibsiga: PSG oo dalab u direysa Paul Pogba, Chelsea oo ku dhawaaneysa Achraf Hakimi iyo Qodob kale	Wararka Ciyaaraha Maanta
[ June 19, 2021 ] Kooxda ku dhow heshiiska Ben White oo La ogaaday.	Wararka Ciyaaraha Maanta
[ June 19, 2021 ] Juventus oo dalab ka gudbisay Qadka dhexe ee Sassoulo Manuel Locatelli.	Wararka Ciyaaraha Maanta
[ June 19, 2021 ] Arsenal oo ku dhow in heshiis cusub ay ka saxiixato Kieran Tierney.	Wararka Ciyaaraha Maanta
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa kala iibsiga: Harry Kane oo lagu heli karo Hal Wado, Chelsea oo u dhaqaaqday Erling Braut Haaland iyo Qodob kale
June 8, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Tottenham ayaa dalban doonta ugu yaraan 50 million (€ 174m / $ 212m) heshiis lacag oo ku aadan Harry Kane, iyagoo oo aan dooneynin wax ciyaartoy ah oo la is weydaarsado, The Sun
Tababaraha Man City ayaa muujiyay rabitaankiisa ah inuu ku daro kooxda ciyaaryahanka Aston Villa Jack Grealish xagaagan waxana uu la meel dhigay Harry Kane ESPN .
Zinedine Zidane ma qaban doono shaqo tabaranimo xilli ciyaareedkaan madaama uu sugayo shaqada xulka qaranka Faransiiska sida laga soo xigtay Libertad Digital .
Pep Guardiola ayaa meesha ka saaray inuu ku laabanayo Barcelona iyadoo tababaraha Manchester City uu ku adkeystay in Ronald Koeman “uu u qalmo” sanad kale Camp Nou. Cadena SER .
Chelsea ayaa si rasmi ah ula xiriirtay Borussia Dortmund saxiixa weeraryahan Erling Haaland, sida ay qortay Daily Mail .
Fabio Paratici ayaa maalmo ka harsan tahay in la xaqiijiyo inuu yahay agaasimaha cusub ee kooxda Tottenham, sida ogaatay Goal .
Xiddiga Atletico Madrid Saul Niguez ayaa lala xiriiriyay kooxo dhowr ah oo waa weyn. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Manchester United iyo Juventus ayaa dhamaantood lala xiriirinayay ciyaaryahanka khadka dhexe laakiin Sport 1 ayaa sheegeysa in u dhaqaaqista kooxda reer Jarmal aysan u badneyn waqtigan. Sport 1
Barcelona ayaa diyaar u ah inay iska dirto Sergi Roberto xagaagan, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo .
Borussia Monchengladbach ayaa indhaha ku haysa saxiixa Josh Sargent, sida ay qortay jariirada Bild .
Wojciech Szczesny ayaa hoos u dhigay hadal heynta ku aadan inuu ka dhaqaaqayo Juventus, isagoo ku adkeysanaya inuusan “masuul ka aheyn” istiraatiijiyadda kooxda ee suuqa kala iibsiga. Goal
Amaahda Manchester United Andreas Pereira ayaa doonaya inuu kordhiyo joogitaankiisa Lazio, isagoo qirtay inuusan laheyn qaab ciyaareed wanaagsan oo kubada cagta Premier League ah. Tuttomercatoweb:
Cristiano Ronaldo ayaa raadinaya xulashadiisa iyadoo la hadal hayo inuu ka tagayo kooxda Juventus xagaagan – sida laga soo xigtay ESPN .
Manchester United ayaa dhameystirtay heshiiska Tom Heaton, laakiin ma shaacin doonaan ilaa iyo bisha July, sida uu qoray Football Insider .
Kubad sameeyaha AC Milan Hakan Calhanoglu ayaa lagu soo waramayaa inuu ku sii dhawaanayo inuu ka tago kooxda iyadoo lala xiriirinayo kooxo badan oo Premier League ah. Sida ay Qortay Ciyaaro.com kana soo xigatay Milan News,
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay durba la xiriirtay Atletico Madrid heshiiskii ay kula soo wareegayaan Saul Niguez . Sida laga soo xigtay Mundo Deportivo
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay rajeyneyso inay iska dirto ugu yaraan seddex ciyaaryahan oo kooxda koowaad ah inta lagu jiro xagaaga dib u habeynta. Mundo Deportivo , Warbixinta oo Somali ah Halkan ka Akhriso Ciyaaro.com
Kooxda ku guuleysatay Champions League Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay weli ku jira loolanka loogu jiro saxiixa Borussia Dortmund xiddiga Erling Braut Haaland xagaagan waxayna ka gudbisay dalab ay kula soo wareegeyso. Daily Telegraph
Brighton & Hove Albion ayaa lagu soo waramayaa inay diyaariyeen qiimaha ay ku doonayaan daafaca Ben White oo ku kacaya 50 milyan ginni, iyadoo ay xiiseynayaan kooxaha Manchester United iyo Liverpool . Sida laga soo xigtay Daily Mail
Georginio Wijnaldum ayaa lagu soo waramayaa inuu ogolaaday inuu ku biiro kooxda Ligue 1 ka dhisan ee Paris Saint-Germain xagaagan, ka dib markii qandaraaskiisa Liverpool uu dhacayo bishaan. The Guardian
Fadlan Salaada Tuko Hadii la gaaray
Wax ka ogoow shan halyeey oo Real Madrid aysan ixtiraamin kadib Ramos.
Wararka Suuqa kala iibsiga: PSG oo dalab u direysa Paul Pogba, Chelsea oo ku dhawaaneysa Achraf Hakimi iyo Qodob kale
Kooxda ku dhow heshiiska Ben White oo La ogaaday.
Juventus oo dalab ka gudbisay Qadka dhexe ee Sassoulo Manuel Locatelli.
Arsenal oo ku dhow in heshiis cusub ay ka saxiixato Kieran Tierney.
Argentina oo guul dahabi ah ka gaartay xulka Uruguay.
Barcelona oo u dhaqaaqday daafaca reer Turki kana Tirsan Liecester city Caglar Soyuncu.
Hordhac: Kulanka Darbiga Portugal Vs Germany ee Euro 2020, Shaxda iyo Xidigaha Dhaawaca ah Kulankan
Hordhac: Kulanka Hungary Vs France ee Guruubka F Euro 2020, Shaxda iyo xidigaha Dhaawaca
Hordhac: Kulanka Spain Vs Poland ee Guruubka E Euro 2020, Shaxda iyo Xidigaha Dhaawaca ah
Juventus, Real Madrid, Manchester City ‘dhamaantood waxay doonayaan Kalvin Phillips’
Kieran Tierney oo qarka u saaran inuu saxiixo heshiis cusub oo shan sano ah oo Arsenal ah
Liverpool oo isku diyaarineysa inay xoojiso raacdada ay ugu jirto Florian Neuhaus
Xulka England oo Bar-baro kala kulmay Xulka Scotland Euro 2020
Rio Ferdinand ayaa amaanay sida ay Real Madrid ula dhaqantay halyeeyada kooxda kadib xafladii sagootinta ee Sergio Ramos
Liverpool oo u aqoonsatay xiddiga La Liga inuu yahay bedelka mustaqbalka ee Roberto Firmino
Croatia oo bar-baro ay galeen Czech Republic ugu soo baxay Wareega 16-ka Euro 2020
Real Madrid oo keentay Qorshe Arsenal ku heli karto Xidiga Martin Odegaard
Manchester United oo ku dhow inay dhameystirto heshiis 75 milyan ginni ah oo ay kula soo wareegeyso Jadon Sancho.
Barcelona oo booska Jordi Alba ka dhigeyso xidig hore uga tegay oo kasoo baxay Lamasia.